Ubulungu - Inhlangano Yezikhungo Zokubhala Zamazwe Ngamazwe
Ilungu lingene ngemvume
Ubulungu be-IWCA buvulekele bonke ochwepheshe besikhungo sokubhala, izifundiswa, nabafundisi kanye nalabo abanentshisekelo ezikhungweni zokubhala nasekufundiseni nasekufundiseni ukubhala. Ngokujoyina i-IWCA, uzozibandakanya nomphakathi wamazwe omhlaba ozibophezele ekuqiniseni umkhakha wezifundo zesikhungo sokubhala.
Izinzuzo zobulungu be-IWCA zifaka, kepha azikhawulelwanga kokulandelayo:
Vota okhethweni bese ukhonza ebhodini le-IWCA
Ukufinyelela kwimicimbi eku-inthanethi kanye ne-portal yobulungu be-IWCA
Amathuba Wokuqhathanisa Abeluleki
Ukufaneleka ukufaka isicelo semixhaso nokwenza iziphakamiso zemiklomelo
Amanani ancishisiwe we Ijenali Yokubhala futhi WLN
$ 50 / ngonyaka wabasebenzi
$ 15 / ngonyaka wezitshudeni
Ukujoyina i-IWCA kusho ukuthi usekela ochwepheshe besikhungo sokubhala kanye nezifundo; ubulungu bakho buxhasa ngqo i- izenzakalo, amaphephandaba, Imiklomelo, Futhi izibonelelo. Joyina i-IWCA noma ungene ngemvume ku-akhawunti yakho lapha.
Lapho usuyilungu, hlola izindlela zokuzibandakanya ne-IWCA.
Ngabe ungathanda ukwenza okuningi ukuxhasa ochwepheshe besikhungo sokubhala kanye nezifundo? Bheka izinketho zethu ze ukuxhasa imicimbi futhi ukwenza iminikelo.